Ma loo baahan yahay in internet la helo oo la cusbooneysiiyo si loo isticmaalo GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Noticias, Kuwa kale
Mawduuc soo noqnoqday (gaar ahaan waddankayga), waa xaqiiqda ah inaad ubaahantahay iyo inkale internetka si aad awood ugu yeelatid GNU / Linux, oo ay la socoto tan, inay rartaan Bakhaar.
Meelaha uu ku xirnaanshaha internetka aad u gaabis yahay ama aan si fudud u jirin, bedel ahaan waa in la helaa disk banaanka ah oo leh nuqul ka mid ah keydka qaybinta ee aan isticmaalno, sidan uma baahnin inaan ku xirno si aan u helno xirmooyinka aan u baahan karno .
Mid ka mid ah doodaha badan ee adeegsadayaasha adeegsadaan Windows, waa xaqiiqda haysashada in ka badan 30GB mashquul baakadaha xitaa ma isticmaali doonno. Meelaha wax lagu keydiyo waxay u arkaan dhibaato, mana ogaanayaan inay taasi runti xal tahay.
Dhibaatada jirta ayaa ah in qof kastaa uusan awood u lahayn inuu yeesho qalab weyn oo laga saari karo (in kastoo qaar badani rumaysanayn), sida sidoo kale ay dhici karto, in aanaan haysan meel aan ka koobiyeeyno oo aan ku cusbooneysiinno keydadka. Laakiin waxaan la yaabanahay Runtii ma u baahan tahay inaad si joogto ah u cusbooneysiiso?
Laakiin waxaan u galaynaa qaybo.
1 Runtii ma waxaan u baahanahay in nala cusbooneysiiyo maalinba maalinta ka dambeysa?
2 Laakiin maxay ka hadlayaan dadka isticmaala Windows?
3 Xalka dhibaatada.
Runtii ma waxaan u baahanahay in nala cusbooneysiiyo maalinba maalinta ka dambeysa?
Waxaan u maleynayaa in heerka cusbooneysiintu uu ku xiran yahay dhammaan waxyaabaha isticmaalaha, dookhooda iyo baahidooda. Tusaale ahaan, waxaan ahay kan u hanqal taagaya inaan arko maalin kasta sida xitaa xirmo cusub ay u galaan keydadka Debian, iyo haddii ay tahay mid ka mid ah waxa aan isticmaalo, xitaa ka sii fiican.
Laakiin taasi macnaheedu maahan inaan ka warqabo inaanan u baahnayn inaan ahaado 100% marka la eego cusbooneysiinta Nidaamkeyga si uu u shaqeeyo, runti, aniga qudhaydu waxaan soo maray toddobaadyo ama bilo aan cusbooneysiin oo aan wax iska beddelay kumbuyuutarkeyga. Guud ahaan, inbadan oo ka mid ah cusbooneysiinta xirmooyinka la mariyo ayaa ah balastarro iyo ciladaha cilladaha ama dhibaatooyinka amniga, laakiin waa inaan aragnaa illaa heerka ay na saameynayaan iyo in kale.
Mid ka mid ah isticmaaleyaashan, oo aan lahayn internet kana cabanaya in aan la cusbooneysiin, maxaad ugu baahan tahay balastar Firefox si looga hortago weerar xaasidnimo ah haddii aadan lahayn nooc xiriir ah? Waa xoogaa tusaale waali ah, laakiin waxaan u maleynayaa inaan soo gudbin karo aragtidayda.
Isla taas oo kale ma dhacdo marka aan la shaqeyneyno server-yada ama mashiinnada wax soo saarka, laakiin waxaan ku celinayaa, taasi waxay kuxirantahay hadba inta ay na saameyneyso iyo in kale.
Laakiin maxay ka hadlayaan dadka isticmaala Windows?
Runtii ma fahmin adeegsadayaasha Windows oo u baahan internetka in la isticmaalo GNU / Linux. Miyay barnaamijyada ay adeegsadaan, cusbooneysiinta fayraska iyo inta soo hartay iyaga ugu yimaadaan iyaga oo ku qubeysanaya saxanka qubeyska? Miyaadan u baahnayn internetka si aad u cusbooneysiiso oo aad xitaa u rakibto qaar ka mid ah barnaamijyadaada?
Maaddaama burcad-badeednimadu tahay amarka maalinta, qof walba wuxuu na siin karaa qolka xafiiska oo dhammaystiran, ama qolka Adobe leh dildilaac, balastar ama nambarka taxanaha ah sida loogu baahdo, laakiin wali, waxaad u baahan tahay in lagugu xiro si aad u cusbooneysiiso Xirmada Adeegga Windows ama saldhigyada Kaspersky.
Laakiin sidoo kale, isla isticmaaleyaashaas "u baahan" internetka si loo isticmaalo GNU / Linux, Iyagu waa isla kuwa isticmaala Windows XP ilaa 2001 iyo xitaa 2012 waxay sii wadaan adeegsigiisa ... Iyo intaan ogahay, ma cusbooneysiiyaan intaas intaa.
Waa run in markii ugu horreysay ee aan rakibno, haddii aynaan isticmaaleyn DVD, waa inaan haysannaa bakhaar aan gacanta ku hayno. In ka badan wax kasta, si aan u awoodno inaan ku rakibno dhammaan codsiyada aan u baahan doono hal mar.
Sida isticmaalaha Windows wuxuu raadiyaa yaa nuqul ka sameyn doona barnaamijyada la cusbooneysiiyay, isticmaale ka mid ah GNU / Linux waxaad ka heli kartaa cidda kuu koobiyeynaysa xirmooyinka adiga laguu cusboonaysiiyey, oo aan ahayn 30Gb Kaydinta, laakiin kuwa aad u baahan tahay.
Si tan loo sameeyo waxaan leenahay wax kabadan hal wado, waxaanna horey ugala hadalnay kuwan beddelka bartayada. Xalku waa in la abuuro bakhaaradeena caadiga ah, runtiina waxa kaliya ee aan u baahanahay waa qof leh xiriir wanaagsan oo internetka ah.
Ma jiraan wax cudurdaar ah, ugu yaraan Debian / Ubuntu waxaan haynaa habab macquul ah oo loo adeegsan karo:
1.- Internet ma lihid? Baro sida loo geeyo keydadkaaga guriga
2.- PSC (Xarunta softiweeriga ah ee la qaadan karo) waxay geyn kartaa bakhaarkaaga guryaha
Marka la soo koobo, internetka ayaa lagama maarmaan u ah labada isticmaale ee GNU / Linux, sida loogu talagalay dadka isticmaala Windows ama Mac. Looma baahna in si joogto ah loo cusbooneysiiyo marka waxa aan hayno ay shaqeynayaan. Laakiin taasi waa ra’yigeyga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ma loo baahan yahay in internet la helo oo la cusbooneysiiyo si loo isticmaalo GNU / Linux?
Waxaan u maleynayaa in sida aad sheeganeysid, aysan qasab aheyn in si joogto ah loogu xirayo shabakada si aan u shaqeyno distoorka aan jecel nahay. Xaalkeyga, iskuulka aan ka shaqeeyo ma jiro internet laga heli karo, marka waa inaan sugaa si aan gurigeyga u gaaro. Xitaa halkaas, marwalba iskuma xirnaado. Waxaan sitaa laptop-kayga meelkasta ilaa iyo hada, wax dhib ah kalamaan kulmin oo codsiyada si fiican ayey u socdaan. Ilaa dhowr bilood ka hor, waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan si joogto ah u cusbooneysiiyo, laakiin markii waqtigu sii socdo, waxaan arkay in Chakra aysan ku sii sameynaynin heerkii ay horay u sameysay, laakiin way ka xasilloon tahay sidii hore.
aad u fiican, waxaan ku darsadaa wax ... waxaa jira waxyaabo la isku diro ... waxaan u maleynayaa in taasi loo yaqaan 'Openuse' waa mid ... inaad kala soo bixi karto waxyaabo badan oo DVD ah oo ay ka buuxdo jilicsanaan.
Suse furan wuxuu leeyahay DVD aad kuheleyso oo kaliya distoorka laakiin sidoo kale dhamaan softiweeryada keydkooda kujiro oo ay kujiraan nidaamka desktop-ka oo kadhexeyn kara sanduuqa-furan ilaa kde, DVD-ga ayaa buuxa xaga sare laakiin kiiskan internet looma baahna marka laga reebo dhejiska ama cusbooneysiinta amniga.
Run, noocyada ku soo baxa DVD-ga waxay la yimaadaan barnaamijyo badan oo dheeri ah, oo marka hore iska ilaaliya baahida loo qabo isku xirnaanta.
Waxay igu dhacdaa aniga, sida xalka aasaasiga ah, inaan nuqul ka sameeyo baakadaha aad uga baahan tahay rakibidda Arch ee diyaarka ah. Waxay ku yaalliin galka / var / cache / pacman / pkg waxaadna ku qasban tahay inaad ku rakibto pacman -U xirmo-waddo.
Waxaan u maleynayaa inaad sidoo kale heli karto nuqulkaaga deegaanka ee keydinta, laakiin runtu iima soo dhicin inaan sidaas sameeyo.
Xirmooyinka xirmooyinka waxaa lagala soo bixi karaa websaydhkooda.
Waxaan sidoo kale u maleynayaa inuu jiray qoraal lagu falanqeeyay xirmooyinka aad ku rakibtay darawalkaaga iyo nooca uu yahay iyo haddii aad rabto xirmo cusub way isbarbardhigi doontaa waxayna soo dejineysaa dhammaan ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah.
Waxaan u maleynayaa inaad ujeedo wax ku saabsan pkg ... laakiin wali waxaad u baahan tahay internetka si aad u hubiso keydka ama ku tiirsanaanta, taasi waa, waxaad had iyo jeer ubaahan laheyd internetka si loogu rakibo xirmadaas cusub adigoon tixgalinin guuldarada iyo weydiimaha suuragalka ah ee aad waa inay qabtaan
Fiiri - » http://gutl.jovenclub.cu/wiki/tutoriales:crear_repo_local_archlinux
waad saxsan tahay kala bar maadaama aan ahay mid ka mid ah dadka isticmaala Linux / Windows ee aan kuu sheegi karo taas (haddii loo maleeyo inaanan internet lahayn) waxay noqon doontaa shahiidnimo in la helo Linux sababo la xiriira barnaamijyo cusub oo aan u maleynayo inaan u baahanahay oo aanan u hoggaansamin ku tiirsanaanta ama Laga yaabee inaan horeyba u haystay laakiin waqtigiisu dhacay ama inaan hubiyo dhibaatooyinka qaar iwm iwm
Hadda shaki iigama jiro in sida loo yaqaan 'Debian' (waxaan u maleynayaa inay tahay tan kaliya) waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo 5 DVD oo xirmooyin ah oo laga yaabo inaadan waligaa isticmaali doonin laakiin haddii ay dhacdo inay halkaas joogaan oo ay kuu xaqiijinayso (waxaan u maleynayaa) in baakadaha oo dhami waxay la jaanqaadayaan distoorkaaga aad hoos u dhacday
Hadda iyada oo aan loo eegin kiiska Linux guud ahaan waa OS weyn (ka fiican MAC oo aad u xiran oo ka amni badan Windows) si kastaba ha noqotee iyada oo aan lahayn isku xirnaanta internetka barashada waxbarashadu waa mid aad u adag ama aad u dheer ...
Rikoodh ahaan, waxaan ugu hadlayaa si dhexdhexaadnimo la'aan ah maadaama aan ahay qof adeegsada Arch oo aamin ah (in kasta oo shaqadayda aan kasii wado guul xp ... wali kamaan qaadin dhinaca mugdiga ahhahaj) sidaa darteed waan ogahay labada dhinac ee lacagta
Markaan tixraacayo ku xirnaanta internetka si aan u cusbooneysiiyo nidaamka, waxaan aaminsanahay in isticmaale kasta oo wata Debian v 6.06 ama OpenSUSE 11.2 DVD uu awoodi doono inuu isticmaalo qalabka iyadoo aan wax dhibaato ah loo qabin iyada oo aan loo baahnayn in la isku xiro oo la helo nidaam si buuxda u shaqeynaya. Hadda, innaga dhexdeenna, waxa ugu horreeya ee aan sameeyo markii aan furayo biraawsarka waa booqashada wararka loo yaqaan 'Distrowatch news' oo aan arko xirmooyinka cusub iyo isbeddellada ku dhaca darbijiifka cusub.
Ah waan ilaaway, anigoo ka saaraya dhinaca isku xirka cusbooneysiinta. Haddii aadan haysan internet, miyaad isticmaali lahayd Linux? Ma yeelo Waxaan ula jeedaa waxbarasho iyo SIDEE-to. Haddii aadan marin u helin DesdeLinux, golayaasha Crunchbang, Arch wiki, iyo kumanaan Blogs ah oo Isbaanish ah, ma awoodi lahayd inaad rakibtid Firefox (maahan barafka)? Dhibaataynta Dhibaatada? Ku dar bakhaar? Ilaa ay kugu qasbaan inaad isticmaasho Software Bilaash ah ama ay ku baraan dugsiga (taas oo aanan garanayn maanta OS-ka la barayo), marin u helka GNU / Linux wuxuu noqon lahaa mid aad u yar. Ka sokow, Windows oo leh Office LA'AAN INTERNET waa aalad aad u fiican, isku xirnaanta ku jirta Linux waxay baraysaa oo cusbooneysiineysaa qalabkayaga nidaamka Microsoft ayaa ka dhigaya mid nugul oo mustaqbalka fog aan la isticmaali karin.
Waan kugu raacsanahay fikradaada
Saaxiib, waxaad dhahdo runti run ma ahan, markii aan ku bilaabay linux, waxaan xasuustaa in bulshada softiweeriga ah ee bilaashka ah ee aan ka maqlay OS-gaan ay ii suurta gashay inaan helo nuqulo ka mid ah nidaamka Debian, Fedora, Knoppix iyo dheer iwm, iyo sida gurigeyga kuma aanan laheyn internet, wixii aan sameeyay waxay ahayd booqashada boggaga tababarka casharrada Linux, waxaanan kala soo bixi jiray bogag dhammaystiran oo leh WGET oo leh macluumaad ku saabsan Gnu / Linux, barnaamijyada Python, c, c ++ iyo dheer iwm. ka dib wax walba ku keydi cd-ga cd-ga ee shaybaarrada jaamacaddayda, waxaanan xusuustaa in qaabkan aan ku helay macluumaad ku saabsan Linux-ka oo aanan dhammeyn aqrintiisa bilo. Maaddaama wget ay leedahay ikhtiyaarka caanka ah ee beddelashada xiriiriyeyaasha shabakadaha loona beddelayo xiriiriyeyaasha maxalliga ah, waxaan si ficil ah u aqriyaa boggeyga Linux sida guriga oo kale. Iyo waxaas oo dhan marka laga reebo, markaan ku dhajiyo barnaamijka raadinta google desktop (mashiinka raadinta maxalliga ah) mashiinkeyga, waxaan ku sameyn karaa baaritaanka maxaliga ah kumbuyuutarkeyga.
Weli waxaan si kalgacal leh u hayaa websaydhada qaarkood oo aan ku soo dejistay wget in iyadoo hadda jirta aan hadda ka sii jirin internetka.
Waxaan xasuustaa in aan ku lahaa barasho xiiso badan oo ku saabsan gnu / linux iyo barnaamijyada sanadahaa oo aan lahaado ama aan internet lahayn marna cudur daar. Salaan.
Waxaan ku bilaabay Linux markii guriga ADSL uu wali qaali ahaa… Waxaan isticmaalay knoppix dvd (kde3 + codecs oo diyaar u ah in la isticmaalo) laakiin markii aan bilaabay Ubuntu waxaan la kulmay dhibaato aad u daran oo aanan haysan koodhadh ama qaswadayaal; Weli waxaan u socday khadka si aan u soo dejiyo baakado, dhibaatooyin rakibaadda miisaska maxaa yeelay waxay weydiisatay ku-tiirsanaan iyo aad u badan ... laakiin waxaan helay mashruuc weli jira "Wadada ubuntu" waa xirmo rakibaysa koodhadhyo iyo qaar ka mid ah barnaamijyada yar-yar ee hal amar, internet la'aan. Marka la eego dukumiintiyada ... ugu yaraan noocyadii ugu horreeyay ee ubuntu iyo knoppix waxay la yimaadeen buug si dhammaystiran u dhammaystiran, ma ogi haddii ay weli jiri doonaan gargaar qad la'aanta ubuntu Maanta waxaa jira kumanaan boggag wax ku ool ah iyo wikis, wax aan ahayn dhowr sano ka hor. Farxad!
Run, ma jiro intaa ka dib caawimaadda weyn ee khadka tooska ah ee ubuntu keentay, ama ma aha mid aad u ballaaran, hadda gnome wuxuu leeyahay mid laakiin aad ayuu u gaaban yahay. Caawintaas waxaan ku bartay wax kasta oo aan u baahdo in aan u isticmaalo ubuntu markii aan wax fikrad ah ka haysan linka oo internet-ka uusan soo gaarin gurigayga.
Internetka, in kasta oo loo baahdo, haddana maahan "xalka" barashada ama caddeynta shakiga, rakibidda xirmooyinka ama cusbooneysiinta. Sida ay yiraahdaan, waad soo dejisan kartaa xirmooyinka oo rakibi kartaa / cusbooneysiin kartaa dabcan marwalba waa inaad hubisaa waxa ku-tiirsanaanta aad u baahan tahay inaad haysato tan iyo guud ahaan "ku dhowaad" dhammaan baakadaha waxay leeyihiin ku-tiirsanaan ama cusbooneysiin iyaga ah.
Ficil ahaan dhammaan distros waxaa jira amar nin oo uma baahnid internetka si aad u isticmaasho. In ku xirnaanta shabakadu ay tahay mid wax ku ool ah, waxtar leh oo raaxo leh haddii ay run tahay, laakiin caqabad kuma ahan shaqada ama waxqabad kasta oo nagu soo dhaca.
Waxaan u maleynayaa inay dhibaatadu tahay marka aadan internet lahayn oo aad u baahan tahay inaad rakibtid koodhadhka si aad u dhageysato muusikadaada, ama aad rabto inaad rakibto libreoffice 3.6 maxaa yeelay way ka dheereysaa furitaanka (taas oo aan xallinaynin haysashada 50 GB ee keydka haddii barnaamijkani hadda soo baxay oo uu ballan qaaday) wax badan oo ka badan kan aad rakibtay), mise waxaad u baahan tahay inaad rakibo lyx si aad ugu qorto maqaal U. Daaqadaha maxaa laga sameeyaa? ma waxaad aadeysaa maqaayada internetka oo aad kala soo baxeysaa .exe, iyo Linux? Waxaa la joogaa waqtigii la dhalan lahaa ku tiirsanaanta ka dibna mid mid loo rakibo, mararka qaarkood waxaa jira 30 ama ka badan (waan sameeyay, markii aanan internet lahayn). Geeriduna waa marka keydku isbadalo maktabadaasina ma ahan meeshii uu maareeyaha baakidku kuu sheegay inay ahaato. PC-BSD wuxuu leeyahay .pbi oo lamid ah .exe oo leh dhamaan maktabadaha oo lagu daro hal xirmo, laakiin liiska codsiyada ayaa aad u yar.
Khibradeyda Linux Mint waxay ku habboon tahay in la isticmaalo internet la'aan haddii aadan rakibi doonin wax ka badan wixii ay horay u keentay maxaa yeelay waa inaad ku dhashaa 20 ku tiirsanaan si aad u rakibto hal barnaamij.
waa cudurdaar kale
Internet la'aan, ma arko barta Linux….
Midkoodna Windows, ama Mac….
Muxuu fiicanyahay OS-ka la'aantiis internetka? wax aad u yar, runta …….
PS: Internetka waxaa loogu talagalay p0rn.
Sidee wanaagsan xilli yar oo Kuuba ah ayaa kuu qaban lahaa! ...
Taasi waxay abuuri laheyd culeys maskaxeed kadib hahaha
Waxaan u maleynayaa inay jiraan dad adduunka jooga oo haa ka shaqeeyaa kumbuyuutarkaaga. XD
Boosto aad u fiican. Runtu waxay tahay inaan sidoo kale dareemayo xamaasad badan mar kasta oo xirmo soo gasho oo aan haysto cusbooneysiin. Si kastaba ha noqotee waxaan ku jiraa Debian Wheezy oo leh dhammaan waxa loo baahan yahay.
Fikradayda, marar badan ayaan ilaawnaa isticmaalka dhabta ah ee softiweerka anoo ka doorbidaya cusbooneysiinta. Waa waxa ay naga iibinayaan, iyagoo wata taleefannada gacanta oo aad u tiro badan iyo noocyo badan oo kala ah Android, iOS, apps, iwm. Waxaan ku jirnaa marxalad haddii aadan cusbooneysiin, waxaad moodaa inaad ka timid da'da dhagaxa ama aadan ka faa'iideysan barnaamijkaaga 100%. Waxaan arkay dad sifiican ulashaqeynaya 'Debian Squeeze' cusub oo rakibay oo dhif ah in la cusbooneysiiyo. Qaar badan oo ka mid ah server-yada (iyaga oo aan u sii socon jaamacaddayda) waxay la shaqeeyaan Debian Lenny. Sidaa darteed jawaabta ugu cad cad ee su'aasha fureysa boostada ayaa MAYA u eg.
Aniga ahaan, GNU / Linux iyo softiweer kasta guud ahaan, wuxuu la yimaadaa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah isticmaalka guud ee pc: baaraha faylka, cayaartoyda, qolalka xafiiska, barnaamijyada sawirada, iwm.
Sida iska cad waxaan had iyo jeer ka ahay aragtida adeegsadaha caadiga ah. Maahan isticmaale adeegsanaya kombuyuutar si xirfad leh.
Iyo ku saabsan internetka, haddii ay run tahay haddii aan tirino daqiiqadaha uu barnaamij kasta furan yahay, biraawsarka webka ayaa noqon doona midka kaalinta koowaad geli doona. Laakiin feker ahaanteyda waa sababta oo ah adeegsiga aan ka sameysanno ee maahan sababta oo ah OS ayaa u baahan. Aniga qudhaydu waxaan isticmaalay pc-ka bilaa internet marar badan, runtuna waxay tahay inay shaqada isla qabanayso does
Salaan iyo sidaan idhi, maqaal aad u fiican!
Sidaa darteed, gabagabadii,
"Runta ayaa ah inaan sidoo kale dareemayo xamaasad badan markasta oo xirmo soo gasho oo aan wax cusboonaysiisto."
Nin, "isticmaale Windows" wuxuu leeyahay oo dhan, waa sida "sirdoonka militariga", tusaalaha ugu fiican ee oxymoron! xD
Haddii aad u baahan tahay dukumiintiyo qadla'aan ah: ku soo dejiso boggaga "ititrack ", runta oo keliya hal jeer oo aad ku xirnaato internetka, Linux-kaaga ayaa heli kara wax walba oo aad u baahan tahay haddii aad wax walba kala soo degsato hal fadhi, xitaa waad soo dejisan kartaa xirmooyinka si aad ugu rakibtid offline, in kastoo sidan oo kale, waxaad u baahan tahay aqoon dheeri ah oo ku-tiirsanaanta, laakiin wanaagsan…. Waxaan jecelahay inaan helo xasiloonidii ugu dambaysay ee arch, waxayna ila tahay aniga inay wax waliba hagaagsan yihiin, haddii aanan lahayn qadka internetka, waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd, iyo haddii aanan weligey internet laheyn (waxaan rajeynayaa weligoodna ma dhacayo) Waxaan u isticmaali lahaa debian ama qaar ka mid ah distro in cusbooneysiintu ay ka gaabiso mid ka yar snail.
Anigu shaqsiyan marwalba waan qoslaa qosol markay ii yimaadaan dooddaas
Waxaan xasuustaa mar aan khaladka ka sameeyay cusbooneysiinta Ubuntu "si otomaatig ah" nooc ka sareeya (waa inaad i cafiyaa laakiin ma xasuusto midkee) iyo qalad dhacay oo iga dhigtay wax aan macquul aheyn inaan wax ku cusbooneysiiyo
Ma ogtahay waxa dhacay? waxba, waxay ahayd kombuyuutar ka socda Ogareña, nidaamkuna horeyba wuxuu ula yimid dhammaan aasaasiga, barowsarka, ciyaaryahanka, barnaamijyada xafiisyada, barnaamijyada sawirada, waxba kama maqna, marka waa maxay faa'iidada loo leeyahay in waqtiga la cusbooneysiiyo?
Maalmahan qaybinta kasta ee GNU / Linux waa diyaar ama waxay ku dhowdahay adeegsi dhammaystiran oo shaqeynaya iyadoon loo baahnayn in waxyaabo badan la rakibo.
Dhibaatada ugu weyn waxay noqon kartaa rakibaadda nidaamka laftiisa, laakiin haddii aad haysato DVD ama USB waxtar leh, waa bulshit.
Waxaan u maleynayaa inay caadi tahay okkkkkkkkk
Keryx waa barnaamij u oggolaanaya soo dejinta xirmooyinka kombiyuutar kale oo leh internet, cashar halkan ku yaal: http://www.k-lab.tk/content/html/keryx.php
FlatPress: CMS ugu dhaqsaha badan, ugu fudud uguna fudud ee aad waligaa heli doonto